TAO ALASORA : Raim-pianakaviana 33 taona nanolana ny zanany vavy vao 15 taona
Efa misy tsy menatra intsony ireo lehilahy sasany ankehitriny fa noho ny filana ara-nofo tsy voafehy sy ny fitadiavana fahafinaretana dia tsy vitsy ny mahasahy manolana ny olom-pady na ny menaky ny aina. 10 août 2018
Lehilahy 33 taona mipetraka eny Alasora no fantatra fa nanolana ny zanany vavy 15 taona. Araka ny fitantaran’ilay renim-pianakaviana dia tsy tao an-trano izy tamin’ny fotoana nanaovan’ny vadiny ny asa ratsiny io.
Rehefa tonga tao an-trano ilay reniny dia notantarain’ilay zaza taminy antsipiriany avokoa ny fametavetana nataon’ny rainy azy. Tsy nino ity zanany ilay ramatoa fa nanaporofo tamin’ilay vadiny ihany koa.
Tezitra ity farany rehefa nanontaniana satria nilaza fa tsy nahavita izany ny tenany. Mba hanamarinan’ilay renim-pianakaviana ireo zavatra notantarain’ilay zanany dia nanapa-kevitra nanatona dokotera izy. Rehefa natao ny fitiliana ilay zaza dia hita tokoa fa efa simba ilay zaza ary potika tanteraka ny fivaviany vokatry ny fametavetana nataon’ny rainy azy.
Nitory ny vadiny ilay renim-pianakavina rehefa nahafantatra ny marina rehetra. Taorian’ny fanadihadiana dia fantatra fa nampidirina am-ponja ilay rangahy ary dia miandry ny fotoana hitsarana azy.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (325) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (168) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (160) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (114) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (84) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (82) 24 novembre 2020